बन्द झोला र विद्यार्थीको भेट कहिले ? - Chandragiri News
Home शिक्षा बन्द झोला र विद्यार्थीको भेट कहिले ?
२०७८, २१ श्रावण बिहीबार १४:४१
साउन २१ गते । कोभिड –१९ को असर देखिनेबित्तिकै विद्यालय बन्द भएका छन् । विद्यालय बन्द भएसँगै दुर्गमका विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकसमेत झोलामै बन्द छन् । विद्यार्थी घरायसी काममा व्यस्त हुँदा पाठ्यपुस्तक राखेको झोलासँग अझैं भेटघाट हुन सकेको छैन् ।
Previous articleच.न.पा १५ ले २१ दिन पुरा गरेका लाइ भोलिबाट चाईनिज भेरोसेल दोस्रो मात्रा खोप लगाईने
Next articleअसल पुलिस र नागरिक मैत्री प्रहरी सेवाले नै संगठनलाई बलियाे बनाउछ : कलंकी ट्राफिक प्रमुख खड्का